१८ वर्षदेखि भात खाएका छैनन् राजेश हमालले | Seto Khabar
१८ वर्षदेखि भात खाएका छैनन् राजेश हमालले
अभिनेता राजेश हमाललाई भेट्ने कुनै पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम थिएन । मौकाले एउटा रेस्टुरेन्टमा भेट जु-यो । भेटपछि उनको जीवनको अन्तरंग पाटो खोतल्ने हुटहुटी भइसकेको थियो । सुरुमा सोचेँ, फिल्मको हिरोसँग फिल्मकै बात गरौँ । तर, फेरि सोचेँ, हमालको फिल्मी जिन्दगी त मिडियामा धेरै छाइसक्यो, नयाँ खासै के होला र ? अनि उनको शिरदेखि पाउसम्म नियालेँ ।उमेरले ५० वर्षमाथिको जिन्दगी बिताइरहेका उनको शरीरमा खासै बुढ्यौली देखिँदैन, अनुहारमा चाउरी भेट्न मुस्किल पर्छ । उनको शरीरमाथिको मेरो एकोहोरो हेराइमा, हमाल पनि केन्द्रित भए । फिस्स हाँसे, ‘जेन्टल’ हाँसो । अब मैले ‘टपिक’ सोच्न भ्याएँ, ‘राजेश हमालको लाइफस्टाइल’ । उनको ‘फिट एन्ड फाइन’ लाइफस्टाइलको राज खासै बाहिरिएको छैन, मिडियामा ।
हमालका सहयोगी दीपेन्द्र महतोको अर्डरमा टेबलमा कफी आइपुग्यो । एउटा कप छुट्याउँदै वेटरले भने, ‘यो चिनी नहालेको’ । दीपेन्द्रले त्यो कप हमालतिर सारिदिएर अर्कोचाहिँ मलाई दिए । चिनी नखाने बानीबाटै अब हमालको लाइफस्टाइल खोतल्न मलाई ढोका खुल्यो ।कहिलेदेखि चिनीविनाको कफी दाइ ? मेरो प्रश्नको जवाफ फर्काए, ‘कफीमा मात्रै होइन, गुलियो, नुनिलो, पिरो र चिल्लो छाडेको धेरै वर्ष भयो ।’ उनले थप सुनाउन थाले, वर्षौँदेखि भातै खान छाडेको यथार्थ । ‘युगदेखि युगसम्ममा काम गर्दादेखि नै भात कम गर्दै आएको थिएँ । समयको अभावमा चिया, चाउचाउ, रोटी अन्डालगायत खाएर भोक टार्थेँ, सात–आठ वर्षसम्म यस्तै निरन्तरता चल्यो,’ हमालले भने, ‘यही लाइफस्टाइल चल्दै जाँदा महसुस हुन थाल्यो, खानामा भात कम गरेको त झनै फाइदा पो हुँदो रहेछ । अनि, भात खानै छाडिदिएँ ।’ १८ वर्षदेखि कहिल्यै भात नखाएको अनौठो लाइफस्टाइल हमालले सुनाए ।
बाहिरको खाना सकेसम्म नखाने अभिनेता हमाललाई घरको खानामा हरियो सागपात, गेडागुडी, माछा र चिकेनजस्ता परिकार चाहिन्छ । खसीको रातो मासु भने चटक्कै छाडेका रहेछन् । सहयोगी दीपेन्द्रले भने, ‘दाइ पहिलेभन्दा अहिले झन् बढी व्यस्त हुनुहुन्छ, फिल्ममा केही पातलिए पनि देश–विदेशका कार्यक्रमहरूमा उपस्थित हुनुपर्दा व्यस्तता बढेको छ ।’हमाल हतारिएपछि पनि १५ मिनेटसम्म गफ तन्काएर मैले रोकेको थिएँ । अब, एउटै जवाफ लिएर बिदाइ गर्ने सुरमा म पुगेँ । खानामा यति धेरै ‘कन्सस’ तपाईं पिउने सवालमा दिलदार हुनुहुन्छ ? लामो हाँसो हाँस्दै हमालले दिलै खोलेर सुनाए, ‘हो म पिउँथेँ, युगदेखि युगसम्ममा खेल्नुभन्दा अघि गज्जबले पिउँथेँ । तर, त्यसपछि भने चटक्कै छोडेको हुँ । मद्यपान मात्रै मोइन, धूम्रपान, सुर्ती र पान सेवन पनि पूर्ण रूपमा त्यागिसकेको छु ।’ रेस्टुरेन्टको बसाइ टुंगियो, अर्को भेटमा अर्को कुराकानी गर्ने वाचासहित ।
रामजी ज्ञवाली’नयाँ पत्रिकाबाट